महिलाहरुले क'ण्डम कसरी प्रयोग गर्छन ? खुल्यो यस्तो रोचक तथ्य
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » यौन जिज्ञासा र समाधान » महिलाहरुले क’ण्डम कसरी प्रयोग गर्छन ? खुल्यो यस्तो रोचक तथ्य
सोमबार ३० मङ्सिर, २०७६
काठमाडौं । सामान्य रुपमा हेर्दा स्त्री क’ण्डमलाई सुखभोग गर्नुभन्दा केहि समय अगाडि लगाउनु पर्दछ । तर तल्काल प्रयोग गरेर सुखभोग गर्न मिल्दैन । क’ण्डममा भएका दुई वटा रि’ङ्गहरुमध्ये खु’म्चिने पट्टिको रिङ्गलाई यो’नी भित्र घु’साउनु पर्दछ ।
अर्को कुरा मिति र प्याकेटमा हावा भए नभएको राम्ररी हेर्नु पर्दछ । म्याद गु’ज्रिएको भए प्रयोग गर्नु हुँदैन यसले विभिन्न सं’क्रमण निम्त्याउन सक्छ । सुखभोगपछि तुरुन्त झि’केको क’ण्डमको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, पुरुष क’ण्डम जस्तै स्त्री क’ण्डमसमेत दुई पटक प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
पछिल्लो समय पुरुष क’ण्डम प्रयोगले महिला पुरुषबीच यौ’न सन्तुष्टिको विषयलाई लिएर ति’क्तता उत्पन्न भएका कुराहरु आइरहन्छन् । महिलाहरुका अनुसार पुरुष क’ण्डम प्रयोगले च’रम आ’नन्द आउँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला क’ण्डम प्रयोगको जानकारी र प्रयोगको चलन बढेको छैन । महिला क’ण्डम प्रयोगबारे नक’रात्मक टिप्पणी भन्दा सकारात्मक पक्षको ज्ञान बाड्न सके प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केहि सुधार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।